भागुवान शिवको आशिर्वाद र कृपा सबै रशिहरुमा हुने गर्दछ ! तर जसलाई भगवान शिव आफ्नो विशेष कृपा राख्दछन ।।
कर्कट राशी: कर्कट राशि माथि भगवान शिव निकै खुशी हुन्छन र आफ्नो कृपा पनि बर्साउछन । यस राशिको मानिस शिवको भक्तिमा सधै तलिन रहन्छन । यस राशिको मानिस भगवान शंखरको कुनै पनि व्रत वा चाडपर्वमा व्रत राख्न छोड्दैनन । भगवान शिवको सधै यो राशि माथि कृपा रहने गर्छ ।
वृस राशी: यस राशिको जातलाई मंगल एकदम राम्रो मानिन्छ । वृष राशिको मानिस भगवान शिवको स्वरूपको निकै नजिक हुन्छन । यस राशिको मानिस चाहे दुखमा होस वा सुखमा सधै भगवानको जप गर्ने गर्छन जसकारण भगवान शिव यिनीहरुको हरेक कामना पुरा गर्ने गर्छन । यस राशिका व्यक्ति सोमबार शिव मन्दिर गएर शिवलिंगमा जल चढाउनु निकै शुभ मानिन्छ ।
मकर राशी: मकर राशिका जात भएका व्यक्ति भगवान शिवको ज्यादा करिब हुन्छन । यस राशिमाथि आउन लागेको आपदलाई भगवान शिवले पन्छाउने गर्छन। यी राशि भएका व्यक्ति जीवनको हरेक उतार चढ़ावमा भगवान शिवको नाम लिन भुल्दैनन । यसकारण भगवान शिव यी राशिमाथि आफ्नो कृपा बर्साउछन । सोमवारको दिन शिवलिंगमाथि दूध चढाउनाले यी राशिलाई एकदम फाईदाजनक हुनेछ ।
Prevके हो स्कुल बस काण्ड , बाहिरियो यस्तो भिडियो !
Nextजो कोहिको यौन इच्छालाई कसरी बढाउने? (भिडियो सहित)